मैले नभनेका उनका कथाहरु » Nepalese Australian
मैले नभनेका उनका कथाहरु
अन्जान शर्मा । उनले सायद मलाई कहिलेपनि मलाई बुझ्न सकिनन् र सक्दिनन् मलाई लाग्थ्यो। धेरै उदाहरणहरु म संग थिए । मैले आफ्नो प्रेम दर्शाउनपनि सकेको थिईन, मन भित्र अनेक कुन्ठा पालेर बसे जस्तो। कुरा स्कुल जीवनको हो । म कक्षाको बायाँ कुना बस्थें, ऊनी दायाँ कुनामा। मैले संधै लुकेर नियालेर हेर्न खोज्थें तर डर लाग्थ्यो कसैले मलाई कतैबाट हेरी राखेकोपो छ कि? अनि डराऊथें, साहस बटुल्न खोज्थें, मनको चाहना सिर्फ बोल्नपाए हुन्थ्यो मात्र थियो। कहिले काहिं मैले कुनै कार्यक्रममा बोल्दा आँखा उनलाईनै खोजीरहन्थे। उनको अनुपस्थितीले मनलाई दु:खीत तुल्याउथ्यो। ऊनी आफ्नो बाटोमा हिड्थिन, म आफ्नो बाटोमा, तर पनि मेरा पाईला उनलाई पच्छ्याईरहेका हुन्थे। कसैलाई केहि भनेको पनि हुन्थीन, खाली आफ्नै धुनमा। न मैले रोएँ, न मैले कराएँ, मैले त सिर्फ उनलाई मनपराएँ। कहिले काहिं बाटोमा जम्काभेट हुन्थ्यो, म डरले रातो हुन्थें, उनी आफ्नो चश्मा मिलाएर जान्थीन् पर कतै कोही मेरो कुराले हांसिरहेको छ की जस्तो लाग्थ्यो। म आफैलाई धिक्कार्थें, मेरी कल्पनाकी ऊनी ।।
भित्र भित्र कति कल्पना बुनेर, आफैंलाई मख्ख पार्ने म, संधै जस्तो एक्लै हराऊथें कता कता कल्पनाको संसारमा। मलाई याद छ त्यो दिन, बक्त्रित्वकलाको कार्यक्रम थियो। भाग्यले भनौं कि के हो ऊनी मरे प्रतिव्दन्दी थिइन् ऊनले बोल्दै थिइन, गाऊ भन्दा शहरिया जीबन बेस। ऊनले भनेको कुरालाई काटी, मैले गाऊले जीवन बेस भन्न पर्ने थियो। मैले ऊनका कुरालाई गलत हुन भनिन, ऊनले शहरिया जीवन शैली र नयाँ जमानाका बारेमा कुरा गरिन, मैले गाऊँले जीवनको सादापन र प्रकृती, मिहेनत र पसिना कुरा गरें। मैले कहीपनि साथीले एस्तो भन्नु भो तर भन्न सकिन मात्र गाऊंको बारेमा राम्रा कुरा प्रस्टयाए। मलाई डर लागेको थियो, कापेको थिएँ। मेरो स्वर पातलिए जस्तो थियो, मैले हारें,उनले जीतिन।
एक चोटी म ज्वरोले थला परेको थिएं, म बिस्तारामा लडेको भएपनि, ऊनले मलाई भेट्न आए हुन्थ्यो जस्तो लागथ्यो। अनि एक दिन ऊनी सपनामा भेट्न आएको देखेको थिंए, त्यो दिन म धेरैनै खुशी थिएं।
त्यसरीनै दिन बित्दै जान्थे मेरा चाहना मनमै हुन्थे। हामीले एस एल सी पनि सक्यौं अनि आफ्ना आफ्ना बाटातिर, म मा अरु धेरै परिबर्तनहरू आए, मैले बि.ई. सकेर र काम सुरु गरें कहिले कता कहिले कता, यसरी नै जादै थियो जीन्दगी। एक चोटी सुर्खेतमा मेरो काम परेर नेपालगंज गएको थिए, जन युद्द चल्दै थियो, बन्द हडताल भै नै रहन्थ्यो, म पनि नेपालगंजमा रोकिनु पर्यो। नेपालगंज बजार घुम्नु पर्यो भनेर होटलको साहुजीसंग बाइक मागें तर साहुजी भने तपाई रिक्सा चढ्नुस आनन्दले घुमाऊछ सितलो पनि हुन्छ।
मलाई राम्रो लाग्यो, ऊनैले चिनेको रिक्सा खोजीदिए, म घुम्न निस्कें। रिक्सा आफ्नै गतिमा थियो, म आफ्नै धुनमा मस्त थिएं। मेरो दायाबाट एऊटा रिक्सा उछिनेर गयो, एऊटी केटी म तिर हेर्दै थिईन्। मलाई देखेर ऊनी हासिन अनि रिक्सा रोकिन। अनि हेल्लो भनिन्। मैले पनि रिक्सा रोक्न भनें, रिक्सा रोकियो। म तल ओर्ले र उनि भएतिर गएं, उनले “ Hey man, how are you, do you recognize me?” म अचम्ममा परें। मैले बल्ल बल्ल चिने, छोटो थाई कट कपाल भएकी, चश्मा लगाऊने ऊनि, लामो सिल्कि कपाल अनि चश्मा को frame चेन्ज भएछ।
म पहिले त हांसे अनि बिस्तारै सोधें, कसरी चिन्यौ नि? उनले भनिन् ‘तिमीलाई पनि म बिर्सिन्छु र?’
उनि अहिले डाक्टर भएकि रैछन, नेपालगञ्ज हस्पिटलमा काम गर्दि रैछन।
ऊनले मेरा बारेमा पनि सोधीन्, मैले पनि भने।
मैले सोधें, तिमिलाई म कसरी याद भएं?
ऊनले भनिन, ‘मेरो मेमोरी त दामी छ नि, तिमिले मलाई स्कुलमा लुकि छिपि हेरेको बिर्सेकि छैन नि। अहिले पनि कोहि त्यस्तो छ कि छैन नि, तिमीले हेरिरहने हा हा हा?’
“तिमिलाई कसरी थाहा भो नि?’ मैले सोधें
“मेरो साईडमा बस्ने केटीले तिमिले गरेको activities वाच गर्दि रैछे, मलाई पुरै भन्थि, मलाई पनि तिमीलाई Disturb गर्न मन लागेन हाहाहाहा” ऊनले मज्जाले हास्दै भनिन।
रिक्सावाला हरु हाम्रो कुरा वास्ता नगरी ऊनिहरुकै कुरामा मस्त थिए।
“मैले, तिम्रो बि. ई. गर्दाको साथी मेरो पनि साथी थियो, ऊसले कुरा गर्दा मैले याद गरें अनि तिमी हो कि भनेर फोटो हेरेकि थिए, मैले चिने, तर मैले ऊसलाई होईन रैछ भने” ऊनले हाँस्दै भनिन्
म छक्क परें, अनि रमाईलो पनि माने।
ऊनले ल है त मेरो मोबाईल नम्बर लीऊ भनेर आफ्नो दिईन, र भनिन् “ If you became unhealthy, and you need some cure, then I will be there”
मलाई स्कुलमा हुंदा बिरामी भएको याद आयो ।
ऊनी बिदा भईन् म पनि घुम्न थालें ।
त्यो पलको पनि आज १ बर्ष बितिसकेछ, मेरो हातमा ऊनको बिहेको कार्ड छ, ऊनले मलाई भाउजुलाई नलिइ आउनु भनेकी थिईन, मेरी जीवन संगीनीपनि हाँस्दै तयार भइसकेकी छन्, सादा भेषमा मृदुमुस्कानले साथ दिदैं जाऊं जाने हैन भन्दै। हाल : तास्मानिया
Wednesday 27th of October 2021 01:48:43 AM